Wonke umuntu abahlala isakhiwo eliphezulu liphumele futhi ungumnikazi komgwaqo, kufanele uqaphele ukuthi kukhona imithetho ekhethekile ezidinga upakile. Futhi akusiwona whims of labo abanayo izimoto. Ake sibone ukuthi yini abayenza, imithetho yokupaka kule ngamamitha of amakhaya. Kukhona okuningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama kanye amaphuzu abalulekile, kanye kuyatuseka ukuba banake konke.
Yini ekhuphuka nalezi zimiso?
Ngempela, kombuzo. Phela, lapho ukubeka imoto ngokunethezeka ngendlela ofuna ngayo. Njengomthetho, seduze kangaka ekhaya noma iwindi lakho ngangokunokwenzeka. Uzokwazi ukubukela imoto yami ngiye ekhaya window of efulethini lakhe, futhi uma kudingekile, akudingeki ukuya kude. Kodwa musa uyazibuza ukuthi kunjani akubona bonke? Cishe, abenzi lokho kuphela une zokuthutha siqu. Abantu abanjalo ephasishi impela eningi, futhi uma bonke wafaka imoto ngoba wayefuna, kuba ukufinyelela nzima kakhulu emnyango, isibonelo, i-ambulensi, kusho amaphoyisa, umlilo. Futhi akunakwenzeka ukuba aneliseke abhubhise labo abangenandaba imoto - banayo sikwazi ukuphefumula qeda yakho futhi njalo ungakwazi ukulala ngenxa umsindo injini ugijima. Kodwa ngenxa yalokhu ngisho nokuthenga necebo imithetho yokupaka emagcekeni emizi. Manje ake baqonde zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Yokupaka egcekeni elingaphansi kwesakhiwo sokuhlala: nongafanele uyenze
Okokuqala, ake sixoxe ngalokho akuvunyelwe nhlobo. Okokuqala, awukwazi ukuhamba imoto yakho ku utshani eceleni komgwaqo, njengoba lezi zindawo kukhona abantu abahamba emgwaqweni, hhayi imoto yakho. Futhi nhlobo ukuba vimbela ndima khulula. Ngakho-ke, izimoto Kumelwe ume ezindaweni eziqokiwe ngokukhethekile, yebo, uma kukhona omunye. Ngenxa yalokho, ezinye imishini, kanye ambulensi, amaphoyisa, umlilo, isevisi igesi kufanele ukufinyelela ukhululekile njalo ingxenye isakhiwo ezinezitezi eziningi. Kuwufanele sokunaka khona ezitolo eduze ekhaya lakho. Awukwazi ukubeka imoto yakho eduze kuka-10 metres, lisuke emnyango sikhungo. Lokhu kungenxa yokuthi umshini kungavela nge umkhiqizo, futhi umgwaqo uzovimbelwa. Uma imoto yakho lide kakhulu ukuma endaweni engafanele, khona-ke kungenzeka ukuthi wayezokuza futhi asuse isevisi izimoto ezikhethekile ukuwela yokupaka noma abalimi wagan 'unwabu kungalimaza imoto yakho.
Imithetho yokupaka imoto ezinkantolo
Futhi manje ngingathanda ukukhuluma kanjani futhi kuphi udinga ukubeka ihhashi yensimbi. Naphezu kweqiniso lokuthi izinqumo lapha mass, iningi namanje ukhetha ukwenza kanjalo, njengoba evumelana nabo, kodwa njengoba umkhuba imibukiso, izikhalazo ezivela komakhelwane eza maduze kakhulu, enjengamakhiwane izingilazi eziphukile umshini, paintwork ezilimele, amathayi punctured nokunye. N. zikhathi ezingemnandi . Cishe abakaze bacabange yokuthi kukhona iziqondiso ekhethekile yokupaka. SDA, isigaba 26,2. "On the yokupaka endaweni yokuhlala." Usho ngokusobala ukuthi imoto kumele bame ezindaweni ezenzelwe ngokukhethekile. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona. Lokhu kungenziwa ukhokhelwe yokupaka eduze kwendlu, noma ngqo egcekeni endaweni ekhethekile, lapho kufanele abeke emotweni yakho. Prakthiza ebonisa ukuthi izindawo ezinjalo zihlale esifushane, futhi ezimweni eziningi, azilona neze etholakalayo.
What do abanikazi imoto?
Eqinisweni, kukhona akunakugwenywa. Izigigaba ukuqinisekisa ukuthi wenze izikhala kweshumi yokupaka egcekeni. Ngakho-ke, kumelwe noma ukusetshenziswa ikhokhwe yokupaka noma wafaka imoto egalaji. Kodwa uma kungekho muntu noma omunye, futhi ezokuthutha, kusadingeka ukubeka endaweni ethile, kudingeka ufune indawo. Ngaphezu kwalokho, imithetho emisha yokupaka enkantolo ezinkantolo zamazwe ukuthi ushiye izimoto endaweni engafanele egcekeni bengayi, ngoba yephula umthetho "Ngo epaki imoto kanye yokupaka izimoto." Kodwa ungakhathazeki, kukhona isixazululo. Udinga ukuya amaphoyisa omgwaqo abuye achaze isimo. Kunoma ikuphi, abasebenzi kudingeka basabele, ngisho noma hhayi ngokushesha. Futhi-ke, kufanele uqonde ukuthi uma izindleko zokuhamba yakho lapho lokho akusho ubuhlungu, akunakwenzeka ukuthi kuzokwenzeka izinkinga. Ungakwazi ngixoxe nomakhelwane babo, noma ufake okokunciphisa umsindo evamile ukuthi ngeke zivuke abantu phakathi kobusuku. Ngaphezu kwalokho, izimoto zanamuhla ukusebenza buthule kakhulu.
Bekusele kancane nje ukuba ngalokho akuvunyelwe
Naphezu kweqiniso lokuthi okuningi isivele wathi, lanamuhla imithetho yokupaka ezinkantolo okuningi ukuhlinzeka. Ikakhulukazi, akuvunyelwe ukubeka imoto yakhe endaweni iziqukathi udoti. Lokhu kwenza kube nzima ukufinyelela amasevisi afanele. Ibanga esincane kumele kube mayelana ezinhlanu amamitha. Ngokuqondene imizila yezinyawo, yaphawula ukuthi abakwazi ukushiya imoto. Kodwa uma kukhona uphawu evumela, kungenzeka ukwenza. Nakuba lokhu ezingavamile kakhulu. Qaphela ukuthi ungafaka imoto noma ngesithuthuthu onqenqemeni eceleni komgwaqo. Kodwa umzabalazo khulula labahamba kufanele kube kabanzi mayelana ngamamitha amabili.
Kumele baqonde ukuthi yokupaka akuvunyelwe nge injini ugijima. Uma isikhathi sidlula imizuzu 5, ngokuba kungenzeka esihle shlopotat. Ukukhethwa iyona ukulayisha / thwebula lutho noma abagibeli kokufika. Futhi, kungase kuqubuke izinkinga ngenxa yokuthi ushiye imoto lapho kuphazamise ngezinyawo, njengoba kunqatshelwe imithetho yemigwaqo. imithetho yokupaka ezinkantolo bathi lokhu kufanele sisetshenziselwe ezindaweni eziqokiwe. Uma ungumnikazi nensephe noma ezinye izindlela zokuhamba, isisindo ingqikithi esingeqile 3.5 amathani, kubalulekile ukubeka imoto ezindaweni eziqokiwe. It kungavunyelwe ukuze ufake okungagunyaziwe yokupaka izithiyo, njengoba kuyoba okwesikhathi akhethekile enkonzo. Uma isikhulu samaphoyisa traffic ukukhiya ke inkinga kuyoba kakhulu.
A kancane mayelana nezidingo yokupaka
Njengoba sekushiwo kancane ngenhla, ungenalo ilungelo ukwakha siqu yokupaka isikhala sakhe. Ngakho-ke, zonke kufanele olunikezwa amasevisi afanele. Ngisho esigabeni ukuklama multi-storey esakhiweni yokupaka isikhala kufanele kufakwe izinhlelo abakhi. Kuyinto abantu abangaba ngu-50 endlini ngayinye. Zonke imithetho nokulungisa kufanele zilandelwe, njengoba okunzima wemithetho yokupaka ezinkantolo kuholela izinhlawulo sina, futhi lokhu uzovuma, akumnandi kakhulu. It bavunyelwe ukuba kwakhiwe le emagalaji okuthiwa futhi yokupaka izimoto 100. Empeleni, ungakwazi ukwakha igalaji semoto yakho kwamamitha ayi-10 kusuka endlini. Uma kungekho amafasitela uphinde uphume kusukela isakhiwo, lokhu ibanga zingancishiswa 7.5 amamitha. Ngakho-ke, liseduze kakhulu. Kodwa ngaphambi ukwakhiwa zonke ungakhohlwa uyavuma.
Yini enye okudingeka ukwazi
akhokhe Njalo ukunakekela yokuthi imoto yakho kungaphazamisi kokubili izimoto kanye nabahamba ngezinyawo. Ungabeka imoto ilungelo ngaphansi kwewindi Yiqiniso, uma ungenawo khumbulani nezinye omakhelwane. Kepha uyama yesikhashana, khona-ke akukho nkinga akukwazi. Uma ebusuku ushiya imoto egalaji emzini futhi ntambama amahora ambalwa egcekeni, cishe akunakwenzeka ukuthi uzothola izikhalazo, ikakhulukazi uma ulandela imithetho yokupaka. SDA kulokhu evumela ukushiya imoto isikhathi esifushane. Inhlonipho, futhi, nabanye abasebenzisi bomgwaqo. Uma wafaka imoto endaweni eyodwa, uma sicela ungathathi yomunye, ngoba kungabangela intukuthelo omakhelwane wakho, futhi akusiyo akupheli ezinhle. Eqinisweni, uma imoto yakho ethulile, akekho esiphazamisayo, futhi awazi kulungele injini eduze amafasitela evuliwe, ungaqiniseka ukuthi isikhalazo sakho ngeke enikeziwe ku-90%.
Sengiphetha, ngithanda ukusho ukuthi yokupaka egcekeni elingaphansi kwesakhiwo sokuhlala - into ulula, ikakhulukazi uma eseduze kukhona endaweni eyayibekelwe ngokukhethekile. Uma kungenjalo, khona-ke kungenzeka ukuthi kukhona eziningi yokupaka esikhokhelwayo, lapho imoto yakho kuyoba sezandleni ezinhle. Yiqiniso, kumelwe imithetho yokupaka in amagceke kwezindlu uyalandelwa. Ngakho ukuphuca ngokwakho zezinkinga izingxabano engenamsebenzi nomakhelwane. Yiqiniso, uma ayikho indawo ukubeka amaloli, bese uzama ukwenza kube okungenani kungaphazamisi nabanye, futhi lonke akuyona inkinga yakho.
Ngakho sibhekene ngempela udaba olubucayi for iningi abashayeli. Thina ukuphendula yonke imibuzo evame ukubuzwa, futhi manje wazi ukuthi imithetho yokupaka in amagceke kwezindlu lapho, futhi kuyinto efiselekayo athobele esiphezulu. Yize noma ungabona ukuthi kwenziwa yini yonke, futhi iningi lazo nje indiva.
Ingatholakala kanjani declaration of conformity imikhiqizo yayo
Toilet ithangi ageleza - yini okumele ngiyenze? Ukulungisa yangasese ethangini
Trap kwamaphela ngezandla zabo: ongakhetha, imibono ngempumelelo futhi impendulo